Fahatsiarovana ny Nahafatesan’i Jesosy: Mety 20 Tapitrisa no ho Tonga
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kikaonde Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
20 MARTSA 2015
Roapolo Tapitrisa no Antenain’ny Vavolombelona Hanatrika An’ilay Fivoriana Fanaony Isan-taona
NEW YORK—Hankalaza ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy ny Vavolombelon’i Jehovah ny zoma 3 Aprily 2015, aorian’ny filentehan’ny masoandro. Io no fotoan-dehibe miavaka indrindra amin’izy ireo ao anatin’ny taona. Hisy lahateny hoe “Ankasitraho Izay Nataon’i Kristy ho Anao!”, amin’io fotoana io, ary haharitra 45 minitra ilay izy. Hanao ezaka manokana eran-tany ny Vavolombelona, amin’ireo herinandro alohan’io fankalazana manokana io, mba hanasana ny mpiray tanàna sy namana ary havana.
Hoy i J. Brown, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any amin’ny foibe any Brooklyn, any Etazonia: “Valo tapitrisa teo ho eo ny Vavolombelon’i Jehovah nanasa olona hanatrika ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy, tamin’ny herintaona. Efa ho 20 tapitrisa àry no nanatrika azy io. Manantena izahay fa hihoatra an’izany amin’ity taona ity.”